Thursday April 12, 2018 - 02:05:30 in Wararka by Super Admin
Hoodada xilka iyo hoggaaminta suuban, waa loo dhashaa, sidoo kalena waxa lagu gaadhaa darajadda Ilahay iyo aqoon la barto. Sidaasi daraadeed waxaynu qormadan kooban ku eegi doonaa horumarka mustaqbalka dhow ee Dekedda Berbera, Maalgelinta Shirkadda Maamusha Dekedda Berbera ee DP World iyo doorka ku daba-galka fulinta mashaaricahaas ee dhinaca Xukuumadda Somaliland.
Ugu horayn Dekedda Berbera oo ay isha ku hayaan Dalal badan oo mandaqadda geeska afrika ku yaal inay ka dhigtaan marin ay wax ka dhoofiyaan, kalana soo degaan, gaar ahaan dalka aynu jaarka nahay ee Eithiopia oo ay ku noolyihiin dad gaadhaya 110 milyan oo go’doon ka ah Bad ay wax kala soo degaan, balse muddooyinkan danbe indhahoodu usoo jeesteen dekedda Berbera oo ku taal marin-biyood muhiim ah iyo goob Istaraajiyadeed, ayaa kaalinta koowaad kaga jira dalalka qorshahoodu yahay inay wax kala soo degan dekedda Berbera.
Si taasi u hirgasho-na waxa dhowaan si rasmiya loo bilaabi doonaa dhismaha Deked Cusub oo ay yeelan doonto Jamhuuriyadda Somaliland oo laga yagleelaayo dekedda hadda maamusha Dekedda Berbera.
Waxa kaloo dhismaha dekedda cusub garab socda adeegyo kala duwan oo lagu balaadhinayo iyo sidoo kale dayac tir qalabyada dekedda oo tayo badan, waxana qorshaha Xukuumadda Somaliland ee mustaqbalka iyo kan Shirkadduba yahay in dekedda Berberi noqoto midda ugu weyn Dekeddaha inaggu xeeran iyo weliba inay noqoto deked ay isticmaalaan qoomiyaddo kala duwan oo yeelata xidhiidh ganacsi oo tamariya. Dp World iyo Xukuumadda Somaliland ee u gadh-wadeenka ka yahay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ka go’an in Free Zone-ka Dekedda Berberi la mid noqdo Free Zone-ka dekedda Dubai ee Jebel Ali, islamarkaana soo jiidan doono maalgashiga, dheeri gelin doono ganacsatada, abuuri doono shaqooyin cusub, kana dhigi doono Berbera marin badeed gobolka laga soo galo. Waxa kaloo Shirkadda DP World wajiga koobaad ee horumarinta dekedda Berbera oo ah Free Zone-ka oo ah 12KM2 kuna dhinac yaalla dekedda sanadkan la bilaabi doono dhismihiisa.